Shirkadaha Shiinaha ee loo yaqaan 'GoldThread Extract Extract', Soo-saareyaal ka socda Bolise
Soosaarida GoldThread Shiinaha
[Magaca Latin] Coptis chinensis Franch.
[Waxyaabaha firfircoon] Berberine Hydrochloride, Berberine, Coptisine, Ferulic acid, Ferulic Acid, Magnoflorine
[Faahfaahinta] 5: 1, 10: 1 iwm
[Qeybta dhirta loo adeegsaday] Rhizome
[Hawsha Ugu Weyn]
1. Kordhinta qulqulka dhiiga ee xagjirnimada waxaana la muujiyey inay leedahay waxyaabo caloosha jilciya.
2. Dhiirrigelinta beerka caafimaadka qaba iyadoo la kordhinayo qulqulka enzymes-ka muhiimka ah.
3. Yareynta xanuunka iyo caabuqa.
4. Daaweynta cillad-darrada dheef-shiidka, jahwareer, dabadheeraad, qandho sare, caabuq afka, hurdo la’aan, xanaaq, dhego xanuun iyo wadno xanuun.
Ku saabsan Soosaarida GoldThread Shiinaha
Soosaarida GoldThread ee Shiinaha ayaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo cillad-darrada dheef-shiidka, jahwareerka, qandho-xumada, qandho-xumada, afka oo barara, hurdo la'aan, xanaaq, dhego xanuun iyo wadno xanuun. Dhaqaatiirta dhaqameed ee Shiinaha waxay u isticmaalaan 'Coptis' inay ku daaweeyaan dhibaatooyinka caloosha, shubanka, dhiig karka, iyo infekshannada bakteeriyada. Waxyaabaha laga soosaaray waxay saameyn ku yeelanayaan qoyaan qoyan, qandho ilaah miyir beel, hurdo la'aan, dhiig nacasnimo kulul, iyo matagid dhiig, matag, aashitada pantothenic, boogaha sunta dabka, indhaha oo gaduudan iyo xanuun.